Lake Michigan: toetra, fiaviana, zavamaniry ary biby | Meteorolojia tambajotra
Portillo Alemanina | 24/12/2021 10:00 | Fisarahana
El farihy michigan iray amin’ireo farihy dimy lehibe any Amerika Avaratra izy io. Voahodidin’ny tanàna maromaro any Etazonia izy io, ka ny iray amin’ireo dia mitovy anarana amin’io farihy mahafinaritra io, ary maherin’ny 12 tapitrisa ny olona mivory manodidina azy.
Noho izany, hanokana ity lahatsoratra ity izahay hilaza aminao izay rehetra tokony ho fantatrao momba ny Farihin'i Michigan, ny toetrany ary ny maha-zava-dehibe azy.
2 Farihy Michigan Features
3 Toetr'andro Lake Michigan
4 Flora, biby ary jeolojia
5 Ny angano sy ny fahalianana amin'ny Lake Michigan
Ny Farihin'i Michigan dia anisan'ny Farihy Lehibe eo amin'ny sampanan'i Etazonia sy Kanada. Ao anatin’ny faritanin’i Etazonia tanteraka anefa izy io. Nasehon’ny fikarohana arkeolojika izany Ity farihy ity dia niforona 13.000 XNUMX taona lasa izay, taorian'ny vanim-potoanan'ny ranomandry farany.
Rehefa nitsonika ny ranomandry, dia tavela teo amin’ny toerany ireo koveta goavam-be feno rano, ka tao amin’io farihy io no nipoiran’ireo koveta ireo, niaraka tamin’ny zavatra hafa, toy ireo efatra hafa tao amin’ilay vondrona.
Lake Michigan no farihy faharoa lehibe indrindra ao amin'ny vondrona Great Lakes; Nitambatra tamin'ny Farihin'i Huron tao amin'ny andilan'i Mackinac aho, izay mitambatra ny ranony ka lasa vondron-drano fantatra amin'ny anarana hoe Farihy Huron, Michigan. Tsara ny mampahatsiahy fa ny andilan-tany dia lalana lehibe amin'ny varotra volom-borona fahiny.
Ny halalin'io farihy io dia voamarika voalohany nandritra ny dia iray tamin'ny 1985, izay notarihan'ny mpahay siansa iray avy amin'ny Oniversiten'i Wisconsin antsoina hoe J. Val Klump; Nahavita nampiasa “submersible” hanaovana fanadihadiana mba hamaritana ny halavany 281 metatra.
Farihy Michigan Features
Ny toetran'ny Farihy Michigan no mampiavaka azy amin'ny farihy hafa eto amin'izao tontolo izao, amin'ny alalan'ireo toetra ireo no ahafahanao mahatakatra ny lafiny fototra maro amin'ilay farihy, eo amin'ireo Farihy Lehibe dia laharana faharoa amin'ny ambaratonga any Amerika.
Amin'io heviny io dia azo lazaina fa manana ireto singa mampiavaka ireto ny Farihin'i Michigan:
Farihy iray any Etazonia ary izy io Ao amin'ny faritr'i Great Lakes izy io.
Voahodidin'ny Amerikanina Indiana, Illinois, Wisconsin ary Michigan izy io.
Mirefy 57.750 kilometatra toradroa izy io, 176 metatra ny haavony ary 281 metatra ny halaliny.
494 kilometatra ny lavany ary 190 kilaometatra ny sakany.
Manana andiana nosy an-tanety antsoina hoe: Beaver, North Manitou, South Manitou, Washington, ary Rock.
Mandray rano avy amin'ny renirano maromaro izy io ary mikambana amin'ny Reniranon'i Saint Lawrence ao amin'ny dobony.
Tanàna maromaro no mifantoka amin'ny morontsiraka, fa ny malaza indrindra dia Chicago, Milwaukee ary Muskegon.
Ny fanjonoana ara-panatanjahantena sy ara-barotra dia atao ao amin'ny farihy, tratra ny trout ary santionany hafa, ary ampidirina ny salmon.
Hitan’ilay mpikaroka frantsay Jean Nicolet izy io tamin’ny 1634.
Ao amin'io farihy io dia nisy dongom-pasika rakotra bozaka maitso sy serizy amoron-dranomasina, na dia tamin'ny faran'ny fahavaratra aza ny rano eto dia mangatsiatsiaka sy mangarahara, ary mahafinaritra ny hafanana.
Misy vato Petoskey ao amin'ny Farihin'i Michigan. Ireo dia fahatsiarovana tsara tarehy avy amin'ny farihy. Izy ireo dia heverina ho vato ofisialin'ny farihy. Tena haingon-trano izy ireo. Manana endrika fôsily izy ireo ary voasokitra tsara. Izy ireo dia miavaka amin'ny faritra ary mihoatra ny 3. Dimampolo amby zato taona.
Toetr'andro Lake Michigan
Farihy tsara tarehy ity ary soso-kevitra ny hitsidika azy indrindra eo anelanelan'ny volana Jona sy Septambra, satria mafana ny andro ary misy rahona amin'ireo daty ireo, na dia mangatsiaka be aza ny ririnina. Ny mari-pana amin'ity faritra ity amin'ny ankapobeny dia miovaova eo anelanelan'ny -7 ° C sy 27 ° C, ary zara raha miova be ireo soatoavina ireo, raha manao izany izy ireo, dia tsy hahatratra -14 ° C na mihoatra ny 30 ° C. Saingy hafa ny zava-misy ankehitriny, satria ny mari-pana ambany indrindra -45 ° C dia voamarina, izay mahatonga an'i Let mivaingana ny ranon'ny Farihy Michigan.
Ny ranony dia miatrika ilay antsoina hoe vokatry ny farihy: amin'ny ririnina, ny rivotra dia miteraka etona hamokatra lanezy, fa amin'ny vanim-potoana hafa, rehefa mitroka hafanana sy mangatsiatsiaka ny rivotra amin'ny fahavaratra sy ny fararano, dia mandrindra ny mari-pana ihany koa izy ireo. Izany dia mamela ny fisehon'ny fehikibo voankazo, izay fotoana iray ahafahana mijinja voankazo betsaka mankany amin'ny faritra atsimo.
Flora, biby ary jeolojia
Tahaka ny ankamaroan'ny farihy, ny toetra ara-jeolojika ao amin'ny Farihin'i Michigan dia ny fisian'ny fahaketrahana amin'ny tany, izay anangonana rano avy amin'ny renirano maromaro; Ankoatra ny mineraly maromaro toy ny vy, dia nentina tany amin'ny Tendrombohitra Appalachian ireo mineraly ireo tatỳ aoriana. Avy amin'ny faritra mpamokatra saribao.
Ny firafitry ny tany ao amin'io faritra io dia mahatonga azy ireo ho manankarena amin'ny famokarana sakafo satria izy ireo dia tena lonaka ary manana ala midadasika. Ny Farihy Michigan dia miavaka amin'ny fisian'ny heniheny voatafika amin'ny rano; misy ahitra avo sy savannah ary dongom-pasika avo be, izay toerana tsara indrindra ho an’ny bibidia.
Amin'io lafiny io, ny biby ao aminy dia aseho amin'ny trondro toy ny trout, salmon, snook ary pike perch, izay mety tsara amin'ny asa fanjonoana ara-panatanjahantena. Eo koa ny trondro, sponjy, lamprey an-dranomasina, voromahery ary karazam-borona maro hafa toy ny swans, gisa, goaika, ganagana, voromahery, voromahery sy ny maro hafa, satria manana harena be dia be ny farihy.
Ny angano sy ny fahalianana amin'ny Lake Michigan
Araka ny filazan'ny masoivoho Travel & Leisure, ny Farihy Michigan dia voahodidin'ny tantara mitovy amin'ny Loch Ness any Ekosy, izay voalaza fa misy biby goavam-be manana andiana toetra taloha izay hita fa tompon'andraikitra amin'ny fanomezana serivisy fizahan-tany ho an'ny faritra. hatramin'ny 1818.
Maro no mino fa ity biby goavam-be mitovitovy amin'ny bibilava ity dia tena izy, araka ny voalaza, fa tsy tena izy, satria tsy nisy nanatona azy, na farafaharatsiny tsy nisy naka sary azy io, noho izany dia heverina ho ampahany amin'ny angano nataon'ny mponina ao. ny faritra tafahoatra mba hisarihana ny fizahan-tany.
Heverinao ve fa misy monsters ao amin'ny Farihy Michigan sa tsia, fotoana mahaliana hitsena azy sy hanao vakansy, satria afaka milomano ao anaty ranony ianao, mankafy andro miala sasatra any anaty ala na mianatra momba izany fotsiny. Ho an'ireo tia lanezy sy ririnina, mivaingana ity faritra ity amin'izao vanim-potoanan'ny taona izao, mba hahafahanao manao fanatanjahan-tena amin'ny ririnina toy ny ski.
Manantena aho fa amin'ity fampahalalana ity dia afaka mianatra bebe kokoa momba ny Farihy Michigan sy ny toetrany ianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Meteorolojia amin'ny tambajotra » Haitoetrandro » Fisarahana » Farihy Michigan